A ìgwè nke magburu onwe pesonel a raara nye elu àgwà chemical okpomọkụ-mgbanwe ngwá na ọtụtụ iri afọ nke ahụmahụ na R&D na n'ichepụta. Ndị otu ahụ gụnyere ndị injinia isii, ndị injinia 17, ndị nnyemaka injinia 24, na ndị ọrụ ntanetị 60.
Anyị Senior Esịtidem Auditors Team nke ISO quality management usoro
Nzukọ anyị na-eme maka igbu 6S
Akara ụwa na-akwado site na ọdịbendị ụlọ ọrụ. Anyị ghọtara nke ọma na ọdịbendị ụlọ ọrụ ya nwere ike ịmalite site na Mmetụta, Ntinye na Mwebata. Nkwado nke otu anyị ka akwadoro site na ụkpụrụ ya bụ isi n'afọ ndị gara aga ------- Ime ihe n'eziokwu, Innovation, Responsibility, Cooperation.
Ndị otu anyị na-agbaso ụkpụrụ ahụ, na-adabere na ndị mmadụ, njikwa iguzosi ike n'ezi ihe, quality ike, adịchaghị aha Ime ihe n'eziokwu aghọwo ezigbo isi iyi nke asọmpi otu egwuregwu anyị.
Ebe anyị nwere ụdị mmụọ a, anyị ewerela nzọụkwụ ọ bụla n'otu ụzọ kwụ chịm ma kwụsie ike.
Innovation bụ ihe dị mkpa n'ọdịbendị ndị otu anyị.
Innovation na - eduga na mmepe, nke na - eduga n’ike elu, Ihe niile sitere na ihe ohuru.
Ndị anyị na-eme ihe ọhụụ na echiche, usoro, teknụzụ na njikwa.
Enterlọ ọrụ anyị na-adịru mgbe ebighi ebi iji nweta ọnọdụ mgbanwe na gburugburu ebe obibi ma dịrị njikere maka ohere ọhụụ.
Ibu ọrụ na-enyere mmadụ aka inwe ntachi obi.
Otu anyị nwere mmetụta siri ike nke ibu ọrụ na ozi maka ndị ahịa na ọha mmadụ.
Ike nke ibu ọrụ dị otú ahụ enweghị ike ịhụ, mana enwere ike ịnwe mmetụta.
Ọ bụ ihe na-akpali akpali maka mmepe otu anyị.
Nkwado bụ isi iyi nke mmepe.
Anyị na-agba mbọ iwulite otu nkwado.
Na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mepụta mmeri mmeri ka a na-ahụta dị ka ihe mgbaru ọsọ dị oke mkpa maka mmepe nke ụlọ ọrụ.
Site n'ịrụsi ọrụ ike na-arụkọ ọrụ ọnụ.
Ndi otu anyi jisiri ike mekota ihe ndi ozo, mmekorita, hapụ ndị ọkachamara ka ha nye egwuregwu ha ọpụrụiche
Anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ dịka anyị na-ekere òkè na ọgụ,
ndị ọrụ niile na-egosi ọgụ ha, mmụọ siri ike na mmụọ.
Anyị bụ ụmụaka, anyị bụ ọdịnihu,
anyị nọ ebe a na Shanghai.